မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: ဘ၀မှာအောင်မြင်ဖို့...
ကိုစေးထူးရဲ့ နိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုရင်..ပို့စ်လေးမှာ အားလုံး တူညီလိုအပ်ချက်က ကိုယ်သွားချင်တဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ဘာသာစကား အဟန့်အတားကို ကျော်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ တွေ့ရသလို ကျမ ငယ်ငယ်ကတည်းက သင်ရတဲ့ english ဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့ ပြောကြားချက်အရဆိုရင် English စာကိုသာ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ နားလည်အောင် ဖတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဘာသင်တန်းဘာကျူရှင်မှ တက်စရာမလိုပဲ သက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာတွေကို လေ့လာဖတ်ရှုပြီး သင်ယူတတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ ကျမ အတွေ့အကြုံနဲ့ အမြင်အရဆိုရင်လဲ ခုလို globalization ဖြစ်လာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ internet ထဲက လေ့လာသင်ယူစရာများစွာကို self study လုပ်နိုင်ဖို့ English စာဟာ အောင်မြင်မှုအတွက် အခိုင်အခံ့ လှေကားတစင်းလို့ ယူဆမိပါတယ်။ ကျမက ငယ်ကတည်းက သင်ထားတဲ့ ဒီ English စာနဲ့ ဘလော့ဂ်တွေ ကဗျာတွေ ဘာသာပြန်တွေကနေ ၀င်ငွေ အနည်းငယ်မှ big income ရတဲ့ အထိ လက်တွေ့ အသုံးဝင်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးစွာ ဆက်လက် သင်ယူလေ့လာနေဆဲပါ။ဒါကြောင့် ကိုရန်အောင်ရဲ့ English4Success blog (http://english4success.blogspot.com) လေးမှာ လုပ်အားပေးချာမသွားလုပ်တဲ့ အနေနဲ့ ဒီပို့စ်လေးတင်ထားတာကို ကျမရဲ့ ဒီဘလော့ဂ်ကိုလာဖတ်တဲ့ မောင်နှမတွေအတွက် ပြန်မလာတာ။ အခုထိ အဲဒီဘလော့ဂ်လေးကိုလဲ မသိသေးတဲ့ သူတွေပါ သိရအောင် လမ်းညွှန်ရင်း အဲဒီလို သင်ခန်းစာ ပို့စ်လေးတွေကို အဲဒီဘလော့ဂ်မှာပဲ ဆက်လက်တင်ဆက်သွားမဲ့ အကြောင်း လက်တို့လိုက်ပါတယ်နော်။ပထမဦးဆုံး စတင်ဆွေးနွေးလိုတာကတော့ အင်္ဂလိပ်စာရဲ့ အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ Eight Parts of Speech ကို ဆွေးနွေးလိုပါတယ်. မြန်မာသဒ္ဒါမှာတော့ ၀ါစက (၈) မျိုးလို့ ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ. အဲဒါတွေကတော့1. Noun (နာမ်)2. Pronoun (နာမ်စား)3. Verb (ကြိယာ)4. Adverb (ကြိယာဝိသေသန)5. Adjectives (နာမ၀ိသေသန)6. Preposition (ရှေ့ဆောင်ပုဒ် (၀ါ) ၀ိဘတ်) (နေရာရှေ့ဆက်များ)7. Conjunction (စကားဆက် (၀ါ) သမ္ဗန္ဓ)8. Interjection (အာမေဍိတ်)စသည်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်.အဲဒီ့ ၀ါစက ရှစ်မျိုးကို အသုံးပြုပြီးတော့ ၀ါကျများကို တည်ဆောက်ထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ. ဒီ ၀ါစကရှစ်မျိုးကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ တတ်မြောက်ရင်တော့ English Grammar ကို ပိုင်နိုင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းအများကြီး ရှိသွားပါပြီလို့ ဦးဦးကထိက က ပြောပါတယ်။အခု ဆရာမ မယ်လိုဒီမောင်ကနေပြီးတော့ ဒီဝါစင်္ဂ ၈မျိုးကို အခြေခံ ဘယ်လို ထားသိုရေးသားရမလဲဆိုတာ ဆက်လက် ပြောပြချင်တာပါ။English မှာ sentence construction (၀ါကျ ဖွဲ့စည်းပုံ) မှာ နှစ်မျိုး အရင် ခွဲခြားလိုပါတယ်။ အဲဒါကတော့Simple sentence (ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော ၀ါကျ) နှင့် Complex sentence (ထွေပြားသောရှုပ်ထွေးသော ၀ါကျ) လို့ပဲ မြင်ကြည့်ချင်ပါတယ်။Simple sentence Construction အနေနဲ့ဆိုရင် S+V+O(PTMR) ဆိုပြီး အလွယ်မှတ်ကြပါစို့။ဒီနေရာမှာ S ဆိုတာ Subject (ပြုလုပ်သူ) ကိုပြောတာပါ။V ကတော့ Verb(ပြုခြင်း၊လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြိယာ) ကိုဆိုလိုပြီးတော့ O ကတော့ Object(အပြုခံရသူ) ဖြစ်ပါတယ်။ PTMR ကတော့ ကြိယာဝိသေသန (Adverbs များဖြစ်ကြတဲ့ place, time, manner, reason) နေရာ၊ အချိန်၊ အပြုအမူနဲ့ အကြောင်းပြချက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ ကျမဆိုလိုချင်တာက ရိုးရှင်းသောဝါကျတစ်ကြောင်းဖွဲ့စည်းဖို့ ဒီအစီအစဉ်ကို အလွတ်မှတ်သားစေချင်ပါတယ်။ မြန်မာသဒ္ဒါလိုဆိုရင် ကတ္တား+ကြိယာ+ကံပုဒ် နှင့် ကြိယာဝိသေသန တို့ ဆိုတဲ့ အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နမူနာလေးတွေ ရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်..I drink coffee daily. Where as I = S; drink= V; coffee= O and daily = TMg Mg held Birthday Party at Park Royal Hotel Last Night. Where as Mg Mg= S; held= V; Birthday Party=O; at Park Royal Hotel=P and Last Night=Tတကယ်လို့ ဥာဏ်ကွန့်မြူးမယ်ဆိုရင် Happily ဆိုပြီး အပြုအမူ Manner ကို သူ့နေရာ အလိုက် နောက်ဆုံးမှာ ထည့်သုံးလို့ ရပါတယ်။ (မှတ်ချက်၊။ အကယ်၍ Last Night ဆိုတဲ့ အချိန်ကို ရှေ့ဆုံးမှာ ကော်မာခံပြီးရေးမယ်ဆိုလဲ ဦးစားပေးရေးတဲ့အနေနဲ့ ရေးလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုခြွင်းချက်တွေကိုတော့ နောက်မှ ဆက်ပြောပါရစေ)ဒါဆိုရင် ခုလို simple sentence လေးတွေကို ၁၀ကြောင်းလောက် စိတ်ကူးထဲမှာဖြစ်ဖြစ် စာရွက်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ် စမ်းတွေးရေးကြပါဦးလို့ အရင် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။နောက်ရက်များမှ ဆက်လက်ပြီး Simple sentence ရဲ့ တခြားမတူညီမှုလေးကို ဆက်ရေးပါမယ်နော်။Credit Goes to Yan Aung(http://yanaung.blogspot.com) for orgainzing this English4Success Blog.